2012-05-13 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
zaw win Theinး​ကို ​ညီ​နေ​မင်း ​ရေ ​တစ်​ခု​လောက်​ကူ​ညီ​လို.​ရ​ရင်​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​နော် ​ကျွန်​တော့် Toshiba Dynabook CX1/212CE laptop ​ရဲ. driver ​ခွေ​ပျောက်​သွား​လို.​အ​ခက်​ကြုံ​နေ​လို.​ပါ ​ကျွန်​တော်​လဲ ​တတ်​နိုင် ​သ​လောက်​တော.​တော်​တော်​မွှေ​ပြီး​ပြီ ​အင်​တာ​နက်​ပေါ်​မှာ ​အစ်​ကို​တတ်​နိုင်​ရင် ​ကူ​ရှာ​ပြီး​တော. ​အစ်​ကို.​ဆိုဒ်​ထဲ​မှာ ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​လား ​အစ်​ကို
​ကဲ​ကို​ဇော်​ဝင်း​သိန်း​ရေ ​ဒီ​နေ့​ည ​ကွန်​ပျူ​တာ​ရောက်​လာ​တာ​နဲ့ ​ခ​ဏ​ဝင်​ပြီး ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​အ​ဖျား​က​တော့ ​မ​ရှိ​တော့​ပါ​ဘူး။ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အား​နည်း​နေ​သေး​လို့ ​အား​ဆေး​သောက်​နေ​ရ​ပါ​တယ်. ​ကို​ဇော်​ဝင်း​သိန်း​တောင်း​တဲ့ Driver ​က xp ​အ​တွက် ​ထင်​လို့ xp ​အ​တွက်​ပဲ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်။ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။
Wireless 3945BG Network Connection(​သင့်​တော်​တဲ့Driver ​ကို Download ​လုပ်​ပါ)
w105159_1.exe | w105159_2.exe | w105159_3.exe | w105159_4.exe | w105159_5.exe